Muqdisho: Guryaha Oo Lambaro Loo Sameynayo & Wadooyin Magacyo La Siinayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Maamulka gobolka Banaadir ayaa xariggaa ka jaray mashruuc lambarro loogu yeelayo guryaha, isla markaana magacyo loogu sameynayo waddooyinka Muqdisho.
Mashruucan ayaa waxaa fulin doonta Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Soomaaliya, iyadoo uu gacan ka siin doono maamulka Banaadir.
Munaasabad lagu daah-rogayay mashruuca oo ay ka qeyb-galeen maamulka gobolka Banaadir, mas’uuliyiin ka tirsan Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha, guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo qeybaha bulshada ayaa lagu qabtay xarunta gobolka ee magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo xariga ka jaray mashruuca ayaa sheegay in howsha ay tahay horumar ay ku tallaabsaneyso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
“Tani waxaan uga gol’leenahay sida aan ula qabsan lahayn horumarka ay dunida ku tallaabsaneyso, jidadkuna magacyo micno sameynaya ayaan u bixineynaa, waxayna hormuud u noqoneysaa xoojinta amniga” ayuu yiri Tarsan.
Ciise Maxamud Xalane oo Madax ka ah Mashruuca oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa faah faahin kabixiyaay waxyaabaha ku dhaliyay in ay soo hindisaan mashruucaan oo ay iska kaashanayaan hirgelintiisa maamulka gobolka benaadir iyo ganacsato Soomaaliyeed.
“Tani waa qaabka Jideynta, magac u sameynta guryaha ku yaalla Gobolka, waana tallaabo lagu ogaan karo horumarka dalka, marka waxaan leeyahay qofkasta haka qeyb qaato” ayuu yiri Ciise Maxamed Xalane.
Qaar kamid ah guddoomiyaasha degmooyinka ee ka qeyb galay munaasabadda ayaa soo dhaweyeey qorshahaasi, waxaana magacooda ku hadlay Muxiyadiin Xasan Jurus guddoomiyaha degmada Yaashiid oo sheegey in ay ka qeyb qaadan doonaan fulinta mashruucan, isagoo shacabka ka codsaday inay kala shaqeeyaan hirgelinta mashruucan.
Dowladdii C/llaahi Yuusuf ayaa horay isugu dayday iney diiwaan geliso guryahay Muqdisho waqtigii uu gudoomiyaha gobolka ahaa Maxamed Cumar Xabeeb “Maxamed Dheere” hase ahaatee barnaamijkaas ayaa fashilmay.